Rajoelina tany Marovoay sy Maevatanana ary Ankazobe: “Hataontsika anatin’ny fotoana fohy ny fampandrosoana” | NewsMada
Rajoelina tany Marovoay sy Maevatanana ary Ankazobe: “Hataontsika anatin’ny fotoana fohy ny fampandrosoana”
Marovoay sy Maevatanana ary Ankazobe indray ny distrika nandalovan’ny kandidà laharana faha-13, omaly. Naompana amin’ny andavanandron’ny mponina amin’ireo faritra ireo ny lahateny sy ny fampanantenana nataony amin’izao fampielezan-kevitra izao. “Hataontsika ao anaty fotoana fohy ny fampandrosoana tsy hitantsika nandritra ny 58 nahazoana ny Fahaleovantena. Hametrahana tohodrano goavana indrindra eto ahafahantsika mampiroborobo ny fambolem-bary. Tanjona ny hampitomboana ny vokatra ka hanondranantsika vary atsy ho atsy fa tsy ho mpanafatra tahaka izao intsony », hoy izy tao Marovoay. Anisan’ny nampitaraina ny mponina ny tsy fisian’ny fotodrafitrasa lehibe ka maina tanteraka ny tanimbary. Anisan’ny sompitra eo amin’ny voka-bary anefa iny faritra iny.
Hihena hatrany amin’ny 25% ny vidin-jiro…
Ankoatra izany, nanteriny koa fa hofoanana ny fanondranana omby any ivelany.
Anisan’ny noresahiny tao Ankazobe ny olan’ny delestazy. “Hampitomboina ny famokarana herinaratra. Hametrahantsika foibe lehibe famokarana izany avy amin’ny masoandro sy ny rivotra eto. Hitondra fahazavana isan-tokatrano aho. Hihena 25% ny vidin-jiro. Hotanterahina avokoa ny ambara rehetra. Izaho tsy mba mpamitaka, tsy mandainga ary tsy mangalatra », hoy ny mpanorina ny IEM. Nampanantena ny tenany fa hanangana EPP manara-penitra, ahitana “parking”, kianja marolafy sy efitra ho an’ny informarika, ahitana ordinatera. Hametraka toeram-pidiovana. Eo koa ny fampidinana ho 30% ny vidin’ny simenitra amin’ny alalan’ny orinasa telo hamokatra izany.
Hanafatra helikoptera miisa 10
Ny fanafarana angidimby 10 hiady amin’ny tsy fandriampahalemana, miaraka amin’ny hery vonjy taitra manokana. Hatao manaraka fenitra ny hopitaly ary omena fiara mpitondra marary ny ao Ankazobe. Nohitsiny fa afa-mitondra ny firenena, nandritra ny dimy taona ny tenany ka tsy mitady fahefana sy voninahitra. “Mijoro noho ny fitiavan-tanindrazana ao anatiko aho. Horesentsika manomboka amin’ny 7 novambra ny firenena rehetra aty Afrika… Hanao ny tratry ny aiko iray manotolo aho hanavotana an’i Madagasikara ity”, hoy ihany izy. Namaranany izany rehetra izany ny filazany fa hitondra fahazavana sy vahaolana ny tenany. Tsy mendrika ny hahantra ny vahoaka ary tsy tokony hahantra isika fa nampahantraina, araka ny nambarany.